★မြန်မာ့အလင်း★: ကလေးတွေရှေ့မှာ မွတ်ဆလင်မိခင်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း
မွတ်ဆလင်မုဒိမ်းကောင်တွေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ တဖက် မိန်းခလေး အရှက်ကွဲလေ ပိုပြီး နှစ်သက်လေဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း မိခင်တစ်ယောက်ကို သူ့ကလေးတွေ ရှေ့မှာ မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ထူးခြာက်ချက်ကတော့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကင်မရာကို သိပ်ဆိုရင်သိပ်ကို ကြိုက်တတ်ပါတယ်။ အခုလည်းကြည့်ပါ။ ကုလားမ ကင်မရာတွေအများကြီးရှေ့မှာ ငိုပြနေတာ တွေ့တယ် မဟုတ်လား? မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာကို ရှက်ဖို့ထက် ကင်မရာရိုက်ခံဖို့ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိထားကြည့်ရင် သိသာပါတယ်
hait kg ..
min dot Na Aa Pha ga ..ka yin girls dway nat tain yinn thar dway ko rape dat vedio lay bar tin bar lar :P
it will be more interesting sit tat da dat lone wai pee ma dai kyin dar so dot min lo phar gaung's rape collection po see gar dar pop kwa ...hahaha
pathetic winn dwin yoo .. physcho ..ur mother was raped by muslim right ? thats y u got winn dwin yoo physcho anti-mulim yaw gar mway yar par lar ma hote lar ,,,hahahaha pathetic loosers!!!
yeah ..ur vedios are quite entertaining :P
chee dwin full of shit n fcked like min may sat pat :D
low life ..invest ur life in muslim lee collections ..min dot budha bar thar dway muslim mone dal pyaw pee malaysia lo muslim country dway twar pee muslim lee lite sote pay nay ya dat ba wa so dot ... min yin nar lal yin nar sa yar pop kwar ...khyut..kyut..kyut.
min dot budha bar thar dway ba wa ga muslim dway yat khai phet kyunasint bae shi dal ...
thousands of millions of muslim dway ko min lo ten millions of budhism dwayamyit phyte chin the pa so yin ..let me advise u ..firstly min dot mulim country dway twar pee sout shat ma shi muslim lee lite sote nay ya dat ba wa gaayin loot aung kyo zar zan bar !!!! sout shat shi yin they lite lo ya dal :P
မွတ်တွေဘာကြောင့် သူတို့ဘာသာကို ရှင်းပြရမှာရှက်တာလဲ